गुल्मीमा दोश्रोचरणको निर्वाचनको तयारी पुरा : यस्तो देखियो वामीटक्सारको तयारी ! – ebaglung.com
२०७४ मंसिर २०, बुधबार १९:५७	Home Slider, Top News, अन्य समाचार, प्रमुख समाचार
कमल पौडेल, गुल्मी (वामी) २०७४ मंसिर २० । भोलि मंसिर २१ गते हने दोश्रोचरणको प्रतिनिधी तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनको सबै तयारी पुरा भएको छ। आज प्रत्येक मतदान केन्द्रमा मतदातको लागी मतदान स्थलहरुको निर्माण गरेको मतदान अधिकृतहरुले जानकारी दिएका छन् ।
यसै विच गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका वडा नं. ७ महेन्द्र आदर्श माविमा २ हजार ३ सय ६ जना मतदाता रहेको र ति मध्ये मतदाता परिचय पत्र लिन वाँकी ५ सय ९ मध्ये २ सय ५७ जनाले मात्रै मतदाता परिचय पत्र लिएको मतदान अधिकृत दोयन्द्र कुँवरले जानकारी दिए ।
महेन्द्र आदर्श मावि मतदान स्थलमको केन्द्र क मा ७ सय ८४, केन्द्र ख मा ७८३ र केन्द्र ग मा ७३७ जना मतदाता रहेको अर्का मतदान अधिकृत घनश्याम ज्ञवालीले बताए ।
मतदातालाई सहज होस भनेर आवश्यक तयारी पुरा गरिएको तथा सुरक्षा लगाएतको सवै प्रवन्ध भएको र तयारी सकिएको अर्का मतदान अधिकृत बावुराम मरासिनिले बताए । भोली विहान ७ वजे देखि साँझ ५ वजेसम्म हुने मतदानमा मतदाता लिष्टमा नाम भए नागरिकता वा परिचय खुल्ने सरकारी कुनै पनि परिचय पत्रवाट मतदान गर्न पाईने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। यस्तै मुसिकोट नगरपालिका सहित गुल्मी र आसपासका क्षेत्रमा निर्वाचनको सवै तयारी पुरा भएको छ।
त्रिभुवन मावि खर्बाङकी छात्रा निरु पुनको असामयिक निधनबाट विद्यालय शोकमग्न !